आज जुन २६ लागुऔषध दुरुपयोग तथा ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाईंदै. – Sabaikoaawaj.com
आज जुन २६ लागुऔषध दुरुपयोग तथा ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाईंदै.
सोमवार, असार १२, २०७४ 7:52:14 AM	मा प्रकाशित
काठमाडौं,१२ असार /लागुऔषध दुरुपयोग तथा ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सोमबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा रहेक वर्ष जुन २६ मा यो दिवस मनाउने गरिएको छ । दिवसको अवसरमा यो वर्षको नारा ‘पहिलो सुनौं’ भन्ने तयर गरिएको छ ।
बालिबालिका र युवालाई सुन्नु उनीहरुलाई स्वस्थ र सुरक्षित रुपमा हुर्कने पहिलो चरण रहेको भन्दै यो नारा तय गरिएको हो । किशोर किशोरी तथा युवा युवती लागुऔषध दुव्र्यसनमा फस्नु पछिल्लो समय ठूलो चुनौती बनेको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले कुलतबाट समाजलाई मुक्त गरेर लागुऔषधमुक्त समाज निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । लागुऔषध दुरुपयोग तथा ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीलाई दुव्र्यसनको कुलतबाट बचाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री शर्माले विद्यालय उमेरका युवायुवतीलाई नियतवस दुव्र्यसनमा लागेका ग्याङले समेत फसाउने गरेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्तालाई कुलतबाट जोगाउन जनचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । गृहमन्त्री शर्माले दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि आफ्ना अभिभावकले सन्तानलाई सचेत बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सुर्ती र रक्सीले पनि मानव स्वास्थ्यमा ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेकाले यसबाट जोगिनु आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो । लागुऔषध निर्मुल गर्दै ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ । यही असार १२ गते गृहमन्त्रालयले लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विशेष कार्यक्रम गरेर मनाउँदैछ ।
प्रकाशित मितिः सोमवार, असार १२, २०७४ 7:52:14 AM